जनगणनामा हामीले हाम्रो संख्या देखाउनु जरुरी छ : नर्बदा क्षेत्री , अधिकार – NepalayaNews.com
जनगणनामा हामीले हाम्रो संख्या देखाउनु जरुरी छ : नर्बदा क्षेत्री , अधिकार
२३ माघ २०७६, बिहीबार ००:२५
प्रत्येक दश दश वर्षमा अमेरिकामा हुने जनगणना यही वर्ष २०२० को मार्च १२ देखी सुरु हुँदै छ । हामीले नेपाली समुदाय के कति छौ भनेर देखाउने यो सुनौलो मौकामा कोही नेपाली पनि यस जनगणनामा छुट्नु हुँदैन । अमेरिकामा हाम्रो प्रतिनिधि पात्राको रूपमा बोल्ने माध्यम नै हाम्रो समुदायको सङ्ख्या हो । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई यसबारेमा जनचेतना फैलाउने काम हामी सबै नेपाली समुदायको उतिकै दायित्व हुन आउँछ । सन् २०१० को जनगणना अनुसार अमेरिकाको न्युयोर्कमा ५,६८१ टेक्सस २,८४२, क्यालिफोर्निया २,३५२ म्यासाचुसेट्स ७५२ सिकागो ५३४, भर्जिनिया ४७३ लगायतका नेपालीहरूको गणना भएको थियो । अमेरिकाको न्युयोर्कमा नेपाली समुदायमा क्रियाशील संस्था अधिकारले पनि जनगणनाको बारेमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत नेपालीहरूलाई जानकारी दिँदै आएको छ र अधिकार मार्फत न्युयोर्कमा विभिन्न ठाउँमा जनगणनाको बारेमा जानकारी दिनका लागी बुध सेन्टर तथा जनगणनाको लागी कर्मचारी तथा सहयोगी कर्मचारीहरू नियुक्ति गरिएको छ । नेपाली लगायत नेपाली भाषी तिब्बितियनहरु माझ पनि अधिकारले सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २०१० मा समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको अधिकारले सन् २०२० मा झन् युद्ध स्तरमा लागेको छ । यसै क्रममा यही आउँदो जनगणनाको बारेमा केन्द्रित रहेर अधिकारकी प्रोग्राम डाइरेक्टर नर्बदा क्षेत्री सगं नेपालयले गरेको कुराकानी ।
अमेरिकी जनगणना भन्नाले के बुझिन्छ ?
प्रत्येक दश दश वर्षमा अमेरिकामा कति मानिसहरू बसोबास गर्छन् भन्ने गणना गरिने कार्यलाई जनगणना भन्ने बुझिन्छ । विशेष गरी अमेरिकामा सन्२०२० को अप्रिल एक तारिक सम्म जो कानुनी रूपमा होस या गैह्र कानुनी रूपमा आएको जो सुकैले पनि राष्ट्रिय जनगणनामा सामेल हुन पाउँछ ।
किन हामीले जनगणनामा भाग लिनु पर्छ ?
हामीले नेपालीहरूको तर्फबाट हेर्दा हामी यती छौ उत्ति छौ भनेर भन्छौ तर लिखित रूपमा हामी धेरै कम छौ अमेरिकी जनगणनामा हामीले हाम्रो दरिलो उपस्थिति देखाउने जरुरी पनि छ । हाम्रो सङ्ख्याका आधारमा नै हामी नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले हेर्ने गर्छे भने त्यही अनुरुं विभिन्न कार्ययोजनाहरु बनाउने गर्छ । जनगणनाका आधरमा नै विभिन्न बजेट बनाउने हुँदा हामीले हाम्रो सङ्ख्या बढी देखाउन सकेमा हामीले बुझिने भाषामा सार्वजनिक स्थल जस्तै अस्पताल ,स्कुलहरू लगायतका ठाँउहरुमा दोभासेको सेवा पनि उपलब्ध हुन्छ भने अन्य अति आवश्यक सूचनाहरू नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध हुन्छ भने यसले नै चुनबमा प्रतिनिधि हुनका लागी काँगेशको सिट पनि निर्धारण गर्छ । अमेरिकी जनगणनामा भाग नलिँदा के फरक पर्छ ? प्रमुख कारण त हामीले पाउनु पर्ने सुविधाहरूबाट वञ्चित हुन्छौ । जति धेरै जनगणनामा सहभागी भएर देखाउन सकेमा बजेट पनि त्यही अनुसार आउने हो सहभागी नभएपछि त्यही अनुसार कम बजेट आउँछ । जनगणना भनेकै शक्ति ,पैसा र सम्मान पनि हो ।
जनगणनामा सहभागी हुनलाई केही सीमारेखा पनि छन् की ?
यसमा सबै ले सहभागी हुन पाउँछ चाहे कानुनी रूपमा बसेको होस या गैह्र कानुनी रूपमा बसेको होस सबैको लागी यो अबश्वर हो ।कस्ता कस्ता व्यक्तिले भाग लिन पाउँछन् ?५ वर्ष सम्मका बच्चाहरूले आफ्ना अभिभावकहरू मार्फत समावेश गर्नु पर्छ भने अन्य व्यक्तिले सिङ्गल रूपमा नै भर्न सक्छन् ।
अधिकारले जनगणना को बारेमा के के गर्दे छ ?
२०१९ मार्च देखी नै विभिन्न समुदायहरुसगं मिटिङ गर्दे सहकार्य गर्दे अगाडी बढेको छौ । न्यु योर्क सिटी सगं मिलेर हामीले जनगणनाको बारेमा हाम्रो नेपाली भाषामा जानकारी मूलक सूचनाहरू प्रकाशन गरेका छौ जसले गर्दा सबै नेपाली हरुले जनगणनाको बारेमा थाहा पाओस् । हामीले अडियो भिडियो लगायत फेसबुक मार्फत प्रचारात्मक अभियान चालेका छौ । हामीले विभिन्न कर्मचारीहरू नियुक्ति गरेका छौ भने कोही भोलेन्टिर रूपमा पनि जनगणनाको लागी कार्यमा खटिएका छन् ।अधिकार कुहिन्स बोरे प्रेसिडेन्ट काउन्सिल कमिटीको मेम्बर, एसियन प्यासिफिक आईरल्याण्ड कमिटीको पनि मेम्बर सँगै साउथ एसियन कमिटीको मेम्बर भएकाले त्यहाँबाट पाउने सुविधाहरूलाई नेपाली समाज सम्म पुर्‍याउने काम गर्दछौ ।
जनगणनाको बारेमा थाहा नभएकाहरूलाई कसरी जानकारी दिन सकिएला ?
जनगणनाको बारेमा हामीले नेपाली भाषामा विभिन्न प्रचार सामाग्री बनाएका छौ जसले सबै नेपालीले बुझन सकोस् भनेर हामीले हाम्रो अधिकार मार्फत पनि विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रचारात्मक कार्यक्रम गरेर सबै नेपाली माझ पुग्छौ । अधिकारको जति जिम्मेवार छ तेती नै हरेक नेपालीले अन्य नेपालीलाई जनगणनाको बारेमा जानकारी दिन उतिकै दायित्व छ । अडियो ,भिडियो तथा फेसबुक मार्फत पनि सबैलाई जनगणनाको बारेमा जानकारी दिने छौ ।
कहिले देखी जनगणना सुरु हुँदै छ ?
मार्च १२ देखी बाट नै चिठी पठाउँछ त्यसलाई सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्छ त्यसमा कोड पठाएको हुन्छ त्यही कोड राखेर नै बनलाईनमा भर्नु पर्छ । तर कोड नभए पनि भर्न चाही मिल्छ । जनगणनाको लागी आउने चिठी घरको मुख्य मान्छेलाई आउँछ यो ३ पटक सम्म आउने गर्छ जसले गर्दा सम्बन्धित मान्छे ले नै पाओस् भनेर । अहिले जनगणनामा बिशेषगरी ८० प्रतिशत वनलाईन र २० प्रतिशत पेपरमा गर्ने भनेको छ । चिठी आएको छ या छैन फोनबाट पनि सम्पर्क गर्छ भने फर्मको बारेमा जानकारी लिन समेत जनगणनाका प्रतिनिधिहरू घर घरको ढोका ढकढक्याउन आउने गर्छन् । हामीले हामीसँगै बसेको रुम पार्टनहरुको पनि नाम राख्नको लागी छुटाउनु हुँदैन ।
जनगणना कहिले सम्म गर्ने सकिन्छ ?
मार्चबाट सुरु भएर जुन सम्म सञ्चालन हुन्छ ।कसैलाई भाषाको कारण जनगणनामा सहभागी हुनका समस्या भयो भने अधिकारले के गर्छ ?कोही पनि नछुटोस् भनेर नै हामीले हाम्रो अधिकारमा आएर पनि भर्न व्यवस्था मिलाएका छौ । भने अन्य विभिन्न ठाँउहरुमा जनगणनाको लागी बुथ सेन्टरहरू राख्ने छौ र जनगणनाको लागी भनेर हामीले छुटै टिम बनाएका छौ त्यसले बिशेषगरी नेपाली र नेपाली भाषीहरूलाई जनगणनाको बारेमा मद्दत गर्छ।
जनगणनाको बारेमा नेपाली सघं सस्धाहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाल र नेपाली भाषीहरूको सख्या देखाउने सुनौलो अबश्वर हो अमेरिकामा रहेका नेपाली संस्धाहरुले यो पनि हाम्रो पनि दायित्व हो भन्ने ठानेर जनगणनाको लागी काम गर्न अनुरोध गर्दछु । जनगणनाका लागी १० प्रश्न हुन्छ र ९ नम्बरमा हामीले अलि बुझ्नु पर्ने छ अन्य एसियन भनेको हुन्छ त्यसको मुनी पट्टी हामीले नेपाली लेख्न छुटाउनु हुँदैन ।
लाखौं अमेरिकी बेरोजगार, कोभिडका कारण रोजगारीमा फर्कन हिच्किचाहट २३ माघ २०७६, बिहीबार ००:२५
ज्ञान, बुद्धि विवेक र संघर्षका सागर बुद्धिसागर २३ माघ २०७६, बिहीबार ००:२५
विश्‍वराज बास्तोला वोर्ड सदस्य मनोनयन । २३ माघ २०७६, बिहीबार ००:२५